कोरोनाको आशंकामा टेकु अस्पताल पुगेका एक नेपाली अस्पतालबाट भा’गे - News20 Media
कोरोनाको आशंकामा टेकु अस्पताल पुगेका एक नेपाली अस्पतालबाट भा’गे
March 5, 2020 March 5, 2020 N20LeaveaComment on कोरोनाको आशंकामा टेकु अस्पताल पुगेका एक नेपाली अस्पतालबाट भा’गे
काठमाडौं।,कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका एक नेपाली शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट फ’रार भएका छन् । कोरियाबाट आएका सुनसरी घर भएका एक युवा बुधबार अस्पतालको आ’इसोलेसन वार्डमा भ’र्ना भएका थिए । उनी बुधबार राति ८ बजे नै भा’गेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।अस्पताल पुगेका उनलाई भाइरसको कुनै पनि लक्षण देखा नपरेको भएपनि कोरियाबाट आएको हुँदा परिवारका सदस्यले संक्रमण भए नभएको पुष्टि गर्न अस्पताल ल्याएको अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज राजभण्डारीले बताए।
उनले भने, ‘उहाँलाई कुनै पनि लक्षण देखिएको थिएन। कोरियाबाट फर्केको हुनाले परिवारले परिक्षणका लागि अस्पताल ल्याउनुभएको थियो। तर उहाँले आफूलाई केही पनि नभएको भन्दै परिक्षण गर्न न’मानेर हिड्नु भयो। हामीले उक्त व्यक्तिको मोवाइल ट्र्’याक गर्‍यौँ। उनी आज बिहान परिवारसँग विमानस्थलबाट विराटनगर गएका छन्।’ सुनसरी घर भएका ३८ वर्षीय उक्त व्यक्तिको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या देखिए तुरुन्त अस्पताल लैजान उनको परिवारलाई आ’ग्रह गरेकाे डा. राजभण्डारीले बताए। उनले भने,‘त्यस्तो आ’त्तिनु पर्ने केही छैन, उनीमा भाइरसको कुनै पनि लक्षण देखा परेको छैन।’
काठमाडाैँ प्रहरी प्रवक्ता हाेविन्द्र बाेगटीले अस्पतालले बुधबार राति एक व्यक्ति काेराेनाकाे परीक्षण नगरी बाहिरिएकाे बताए। ‘बुधबार राति साढे आठ बजे अस्पताल पुगेका उनी त्यहाँ दुई घण्टा बसेर कुनै परीक्षण नगरी बा’हिरीएकाे खबर हामीलाई प्राप्त भएकाे थियाे। तर उनी काेराेना संक्रमित भएकाे भन्ने कुनै आधार छैन’,उनले भने। ती व्यक्ति मंगलबार मात्रै दक्षिण काेरियाबाट नेपाल आइपुगेका थिए।
ओलीलाई मिर्गौला दान गरेकी समीक्षाले कसरी गरिन यस्तो निर्णय ?
प्रहरीबाट गल्ती भएको छैन, दोषी भेटिए आस्था राउतलाई कारबाही: डीआईजी पोखरेल